ခြံဝန်းအကျယ်ကြီးပါတဲ့ အပန်းဖြေအိမ်ရာကြီးကို ဝယ်ယူခဲ့သူ ထိပ်တန်းမင်းသမီး Zhao Liying | Asia News Bar
ခြံဝန်းအကျယ်ကြီးပါတဲ့ အပန်းဖြေအိမ်ရာကြီးကို ဝယ်ယူခဲ့သူ ထိပ်တန်းမင်းသမီး Zhao Liying
အများတကာချစ်ရတဲ့ တရုတ်ထိပ်တန်းမင်းသမီး Zhao Liying ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လွတ်လပ်စွာနဲ့ပဲ နေ့မအားညမနား လုပ်ကိုင်နေပြီး လှပတ‌ဲ့နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းနေပါတယ်။ ကြေးအမြင့်ဆုံးသရုပ်ဆောင်တွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်သူ Zhao Liying ဟာ ခြံဝန်းအကျယ်ကြီးနဲ့ အပန်းဖြေအိမ်ကြီးကို ဝယ်ယူလိုက်ကြောင်း ဇူလိုင် ၂၁ ရက်နေ့က သတင်းမီဒီယာတွေက ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
Feng Shaofeng နဲ့ ကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက် ပေကျင်းကိုပြန်လာခဲ့တဲ့ Zhao Liying ဟာ သူမအတွက် သန်းနဲ့ချီတဲ့ အိမ်ရာခြံမြေကြီးကို ဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် သတင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Dongwang” ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ Zhao ဟာ အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့နေ့ရက်တွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြတ်သန်းနေပေမဲ့ ပေကျင်းမှာပဲ ဒေါ်လာ ၁၅ မီလီယံကျော်တဲ့ ဇိမ်ခံအိမ်ဝန်းကျယ်ကြီးကို ဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ခြံကျယ်ကြီးကတော့ ပေကျင်းရဲ့ East Fourth Ring Road မှာတည်ရှိ‌တာဖြစ်ပြီး အဆိုပါအရပ်ဟာ ‌လူကုံထံအသိုင်းအဝန်းတွေနေထိုင်တဲ့ ဆိတ်ငြိမ်အရပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာဆန်ဆန် လှပသာယာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြီး ခြံအကျယ်ကြီးထဲမှာလည်း ဥယျာဉ်၊ ရေကန်၊ မြက်ခင်းစိမ်းတွေအပြင် မိုးမခပင်တွေကလည်း ခြံဝန်းအနှံ့မှာ လှပစွာတည်ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အိမ်ရှေ့မှာတော့ သီးသန့်ပန်းခြံတစ်ခု ရှိနေပြီး အိမ်ကြီးက ၂ထပ်အဆောက်အဦကျယ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ နံရံတွေကိုတော့ တကယ့်ကျောက်သားအစစ်တွေကိုသုံးပြီး တည်ဆောက်ထားပြီး အိမ်အတွင်းပိုင်းကတော့ သေချာဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဖော်ပြချက်တွေအရ Zhao ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ အပန်းဖြေအိမ်ကြီးဟာ တော်တော်လေးတင့်တယ်လှပပြီး နန်းတော်ကြီးနဲ့တူတဲ့ အဆင့်မြင့်တဲ့အိမ်ကြီးပါပဲ။
တရုတ်မီဒီယာတွေရဲ့ စစ်တမ်းတွေအရ ထိပ်တန်းမင်းသမီး Zhao Liying ရဲ့ ၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၀ အတွင်း ဝင်ငွေရရှိနှုန်းဟာ ယွမ် 1.37 billion အထိရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းဖော်ပြထားကြတာကြောင့် အခုလိုအိမ်ကြီးမျိုးကို အလွယ်တကူဝယ်နိုင်ခြင်းဟာ မထူးဆန်းလှပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့တွက်ဆချက်အရ ထိုအိမ်ကြီးဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ မီလီယံထက်မနည်း တန်ဖိုးမြင့်နိုင်ပါတယ်။
လတ်တလောဝယ်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုယ်တိုင်နေဖို့အတွက် ဝယ်ယူလိုက်တာလား? မြှုပ်နှံမှုအနေနဲ့ပဲ ဝယ်ယူလိုက်သလား? ဆိုတာကို Zhao Liying က ဖော်ပြပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်တဲ့ ကြေးအကြီးဆုံးစာရင်းဝင် ထိပ်တန်းမင်းသမီးဖြစ်တဲ့ Zhao Lying ကတော့ သူမရဲ့အိမ်ခြံမြေ အသစ်ကြီးကို ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်ပါတော့တယ်။
Next Instagram မှာ like (၈) သန်း​ကျော် ရရှိတဲ့ ပထမဦးဆုံး အာရှအနုပညာရှင် ​တွေဖြစ်လာတဲ့ Lisa နဲ့ V »
Previous « Henan ရေဘေးအတွက် Wang Yibo ရဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် သွားရောက်ကူညီမှု အပါအဝင် အနုပညာရှင်များရဲ့ လှူဒါန်းမှုများ
“Peace Elite Championship” ကို အလန်းစားခပ်မိုက်မိုက်ပုံစံတွေနဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကြီးတွေကတော့…
မကြာခင်ထွက်လာတော့မဲ့ နာမည်ကြီးပေါင်းများစွာပါတဲ့ “The Long Ballad” သိုင်းဇာတ်လမ်းကောင်း
L.TAO Entertainment က အနုပညာရှင်တွေရဲ့အချစ်ရေးကို ပိတ်ပင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တဲ့ Huang Zitao
အသက်သွင်းတော့မဲ့ “Heaven Official’s Blessing” BL ဝတ္ထုအတွက် ဇာတ်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိရသမျှကတော့…
The Eternal Love3မှာ kissing scene တွေလျှော့ဖို့ စ,တဲ့အခါ Xing Zhaolin ဖြေရှင်းပေးလိုက်ပုံက…